News under बलिउड
कटरिनाकी बहिनी इसाबेलको विकिनी तस्वीर सार्वजनिक (हेर्नुहोस)
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 30th July 2021
एजेन्सी । कटरिना कैफ बलिउडकी सर्वाधिक चर्चित अभिनेत्री हुन् । उनले बलिउडमा आफ्नो छुट्टै स्थान बनाइसकेकी छिन् । कटरिना कैफकी बहिनी इसाबेल कैफ सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छिन् । उनले हालै केही विकिनी तस्वीर खिचाएकी छन् र सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेकी छन् । उनै कटरिनाकी बहिनी पनि बलिउडमा डेब्यु पनि गरेकी छिन् । इसाबेलको...
कलाकार नवाजुद्दिनले भने- 'देश यस्तो अवस्थामा रहँदा सेलिब्रिटी माल्दिभ्स पुगेर तमासा देखाउन लाज लाग्दैन’
काठमाडौं &ndash; भारतमा कोरोना महामारीले दैनिक २ हजार भन्दा बढी मानिसहरुको ज्यान गइरहेको छ । यस्तो समयमा भारतका विभिन्न राज्यमा लकडाउन समेत घोषणा गरिएको छ । तर, बलिउडका केही कलाकार भने होलिडे मनाउन भन्दै माल्दिभ्स पुगेका छन् । माल्दिभ्स पुगेर उनीहरुले सामाजिक संजालमा घुमफिरका तस्वीर पोष्ट गरिरहेका छन् । तर, यो...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 23rd April 2021
काठमाडौं । नब्बेको दशकमा कयौं गीतमा संगीत भर्ने नदिम&ndash;श्रवणको जोडी टुटेको छ । विहीबार श्रवण राठोरको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएपछि संगीतकारको यो चर्चित जोडी टुटेको हो । श्रवणको विहीबार राति मुम्बईस्थित रहेजा अस्पतालमा निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । फिल्म आशिकीका गीत हिट भएपछि उनीहरु चर्चाको शिखरमा पुगेका थिए । नदिम&ndash;श्रवणको...
राधेमा सलमान र दिशाको रोमान्स
काठमाडौं । बलिउड सुपरस्टार सलमान खान अभिनित प्रतिक्षित चलचित्र &lsquo;राधे&rsquo; आगामी महिना इदको उपलक्ष्यमा रिलिज हुँदैछ। गतवर्षकै इदमा रिलिज हुने तयारी भएता पनि कोरोना भाइरसका कारण रिलिज मिति एकवर्ष पर धकेलिएको हो। बिहीबार मात्र राधेको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ। यो चलचित्रमा सलमान र दिशा पटानीको रोमान्स देख्न सकिनेछ। चलचित्रमा ज्याकी श्रोफ र रणदीप...
अभिनेता सोनु सुदलाई कोरोना संक्रमण
काठमाडौं &ndash; कोरोना भाइरसको प्रकोप सुरु भएपछि आफ्नो घर जान नपाएका हजारौं मजदुरलाई घर पुर्&zwj;याउन मद्दत गर्ने भारतीय अभिनेता सोनु सुदलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ। गत शनिबार सोनुलाई कोरोनाको संक्रमण भएको उनले आफ्नो ट्विटरमा जानकारी दिएका छन्। सोनुलाई कोरोनाको संक्रमण भएको खबरसँगै उनका हजारौं समर्थकले स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छन्। कोरोना प्रकोपका...
मुम्बई&ndash; भोजपुरी फिल्म उद्योगकी अभिनेत्री रानी चटर्जी प्रायः आफ्नो इन्स्टाग्राममा बोल्ड तस्वीर राखेर चर्चामा आउछिन् । उनको बोल्डनेस तस्वीरले जोकोही फ्यानको मन खुशी हुन्छ । बलिउड लाइफमा प्रकाशित समाचारअनुसार यसपटक रानीले त्यस्तै एक तस्वीर राखेकी छन्, जुन तस्वीरले जोकोही चकित परेका छन् । उनले आफ्नो बेडरुममा टपलेस फोटोसुट गराएकी छन् । तीमध्ये...
अभिनेत्री मलाइकाले हिराको औठी लगाउनुको रहस्य!
मुम्बई&ndash;बलिउड अभिनेत्री मलाइका अरोडा फिल्म उद्योगकी ती अभिनेत्रीमा पर्छिन्, जो आफ्नो फिटनेसलाई निकै ध्यान दिन्छिन् । उनी आफ्नो दैनिक समय तालिका जति व्यस्तपूर्ण भए पनि आफूलाई फिट बनाउन समय निकाल्छिन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छिन् । समयमा समयमा भिडियो तथा तस्वीर पोस्ट गर्नाले पनि मलाइकालाई सामाजिक सञ्जालमा निकै चासोका...
यी बलिउड सेलिब्रेटी जसले मृत्युलाई जिते
मुम्बई&ndash;बलिउडमा यस्ता कैयौं सेलिब्रेटीहरु छन्, जो गम्भीर बिरामी भइसकेका छन् । यद्यपि आफ्नो दृढ हौसलाका कारण उनीहरुले मृत्युलाई जितेका छन् । अमर उजालाले यस्तै केही सेलिब्रेटीहरुको एउटा सूची तयार पारेको छ, जसले मृत्युलाई जितेर नयाँ जीवन बाँचिरहेका छन् । फिल्म &lsquo;कुली&rsquo;को छायांकनका दौरान दुर्घटना भएपछि अभिनेता अमिताभ बच्चनले औषधिको धेरै डोज लिएका...
महाभारतका इन्द्रको कोरोनाले लियो ज्यान
एजेन्सी &ndash; बीआर चोपडाले निर्देशन गरेको &lsquo;महाभारत&rsquo;मा इन्द्र देवताको भूमिकामा देखिएका अभिनेता सतिश कौलको निधन भएको छ । उनको ७४ वर्षको उमेरमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो । कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि स्वास्थ्य अवस्था भने सुधारोन्मुख नै थियो । बिहान ठिक छु भनेका कौलको दिउँसो निधन भएको उनकी बहिनी सुष्माले...
एजेन्सी &ndash; बलिउड स्टारहरुका लागि माल्दिभ्स सबैभन्दा प्रिय देश मानिन्छ । विशेषगरि, कामको थकानबाट मुक्ती पाउनका लागि बलिउड स्टारहरु माल्दिभ्स पुग्छन् । विदा मनाउनका लागि उनीहरुको पहिलो रोजाइको गन्तव्य बनेको छ माल्दिभ्स । अब, बलिउड नायिका जानवी कपुर पनि बिदा मनाउनका लागि माल्दिभ्स पुगेकी छिन् । उनले, सामाजिक संजालमा माल्दिभ्समा रमाइलो...
अभिनेत्री जयाले फिल्म सेटमै रेखाको गालामा थप्पड हानेपछि...
काठमाडौं&ndash; जया बच्चनले शनिवार आफ्नो ७३ औं जन्मदिन मनाईन । जया बच्चनलाई चिनाउने केही विशेषण छन् । जस्तो कि, उनी अमिताभ बच्चनकी श्रीमती हुन् । अभिषेक बच्चनकी आमा । तर बलिउडमा उनको आफ्नै चिनारी छ । बलिउडमा कहलिएकी अभिनेत्री हुन् उनी । जयाले १५ वर्षको कलिलो उमेरमै अभिनय सुरु गरेकी थिइन्...
नायिका कटरीना कैफलाई कोरोना पुष्टि
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 07th April 2021
काठमाडौं । बलिउडकी चर्चित नायिका कटरीना कैफलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । नायिका कैफले सामाजिक सञ्&zwj;जाल इन्स्टाग्राममार्फत् आफू कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिएकी हुन् । उनले आफ्नो पोस्टमा लेखेकी छिन्, &lsquo; म कोभिड १९ पोजिटीभ भएकी छु।मैले तुरुन्तै आफूलाई आइशोलेट गरिसकेकी छु।र होम आइशोसनमै रहन्छु । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नै...
बलिउड कलाकार किरण खेरलाई क्यान्सर
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 02nd April 2021
दिल्ली &ndash; चर्चित बलिउड कलाकार किरण खेरलाई रगत सम्बन्धी क्यान्सर भएको छ। किरणका श्रीमान अनुपम खेरले आफ्नी श्रीमतीलाई ब्लड क्यान्सर सम्बन्धी रोग लागेको र अहिले उनको उपचार भइरहेको जानकारी दिएका हुन्। इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार किरण खेर भाजपाकी सांसद पनि हुन्। उनलाई मल्टिपल माइलोमा भन्ने रोग लागेको छ। यो एक प्रकारको ब्लड क्यान्सर...
अभिनेता रजनीकान्तलाई दादा साहब फाल्के अवार्डबाट सम्मान गरिने
मुम्बई &ndash; भारतीय अभिनेता रजनीकान्तलाई दादा साहेब फाल्के अवार्डबाट सम्मान गरिने भएको छ। यो अवार्डलाई भारतीय सिनेमाको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार मानिन्छ। बिहीबार (१९ चैत) भारतका केन्द्रीय सूचना एवम् प्रसारण मन्त्री प्रकाश जावडेकरले ट्वीट मार्फत ५१औं दादा साहेब फाल्के अवार्डको घोषणा गरेका हुन्।&nbsp; मन्त्री जावडेकरले पाँच सदस्यको जुरीले अवार्डका लागि सर्वसम्मत रुपमा रजनीकान्तको...
अभिनेता एजाज गिरफ्तार
मुम्बई । बिग बोसबाट लाइमलाइटमा आएका अभिनेता एजाज खानलाई एनसीबी (नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो) ले गिरफ्तार गरेको छ । राजस्थानबाट मुम्बई फर्कनेक्रममा एजाजलाई एनसीबीले एयरपोर्टबाटै नियन्त्रणमा लिएको थियो । जसपश्चात् उनीसँग एनसीबीले लगातार आठ घण्टा सोधपुछ गरेपछि गिरफ्तार गरेको हो । एजाजको सम्बन्ध मुम्बईस्थित लागुऔषध सप्लायर शादाब बटाटासँग भएको एनसीबी अधिकारीहरुको दाबी...
कसरी अडियो अभिनेत्री साराको लुगा ?
काठमाडौं &ndash; बलिउड अभिनेत्री सारा अलि खानले हालै नयाँ डिजाइनको लुगाहरु लगाएर सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेकी छिन्। मनिष मल्होत्राको डिजाइनमा बनाइएको स्टाइलिस कपडा लगाएर साराले फोटोसुट गरेकी हुन्। धेरै तस्बिरमध्ये एक तस्बिर भने यतिबेला खुबै चर्चामा छ। साराको सेतो ब्लाउजसहितको ड्रेस भाइरल बनेको हो। उक्त तस्बिर पोस्ट भएसँगै उनका फ्यानहरुले सो लुगा...
बलिउड नायक अजय देवगनले कुटाई खाएको भिडियो भाइरल भएपछि..
काठमाडौं &ndash; बलिउड नायक अजय देवगनको नाममा एक भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल भैरहेको छ । यो भिडियोमा दाबी गरिएअनुसार अजयको दिल्लीको एक पवको बाहिर झगडा भएको थियो र सो झगडाका क्रममा मानिसहरुले उनीलाई कुटेका थिए । सामाजिक संजालमा भिडियो भाइरल भएपछि अजयले स्पष्टिकरण दिएका छन् । उनले, सामाजिक संजालमा भिडियो शेयर...
कृति सेननको ग्ल्यामरस् तस्बिरमा अमिताभ बच्चनको लभ रियाक्ट
काठमाडौं &ndash; बलिउड अभिनेत्री कृति सेननले इन्स्टाग्राममा शुक्रबार मात्र एउटा ग्ल्यामरस् तस्बिर सेयर गरेकी छिन्। गर्मी याम लागेसँगै कृति सेननले ग्ल्यामरस् तस्बिर पोस्ट गरेपछि उक्त तस्बिर भाइरल बनेको छ। त्यसमाथि बलिउड सुपरस्टार अमिताभ बच्चनले उक्त फोटोमा कमेन्ट गरेपछि उनको तस्बिरको चर्चा झनै सर्वत्र बन्न पुगेको छ। हाल उक्त तस्बिरमा १५ लाखभन्दा बढी लाइक्स...
आयकर विभागले घरमा छापा मारेपछि नायिका तापसीले भनिन् –‘पेरिसमा मेरो घर छैनँ’
एजेन्सी &ndash; भारतको आयकर विभागले फ्यान्टम फिल्मस्को कार्यलय र यसका शेयर सदस्यहरुको घरमा छापा मार्यो । नायिका तापसी पन्नु, निर्माता अनुराग कश्यप लगायतको घरमा पनि आयकर विभागका कर्मचारीले छापा मारे । यो चलचित्र निर्माण कम्पनीका शेयर सदस्यहरुले ६५० करोडको आयकर छली गरेको आशंका आयकर विभागका कर्मचारीले गरेका छन् । विभागले छापा...
दोस्रोपटक आमा बनिन् अभिनेत्री करिना कपुर
काठमाडौं &ndash; बलिउड अभिनेत्री करिना कपुर दोस्रो पटक आमा बनेकी छन्। आइतबार करिनाले दोस्रो सन्तानका रुपमा छोराको जन्म दिएकी हुन्। यसको जानकारी रणवीर कपुरकी बहिनी ऋद्धिमा कपुरले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएकी हुन्। सुत्केरी व्यथा लागेपछि करिनालाई गएराति मुम्बइस्थित ब्रिज केन्डी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। करिना र बच्चा दुवैको स्वास्थ्य राम्रो भएको बताइएको छ। सन्...
अभिनेता प्रभास डुबे हजार करोड ऋणमा
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 16th February 2021
मुम्बई&ndash; फिल्म &lsquo;बाहुबली&rsquo; फेम्ड अभिनेता प्रभास एक हजार करोड रुपैंयाँ ऋणमा डुबेका छन् । कोभिड १९ को महामारीका कारण अन्य क्षेत्र झैं विश्वको फिल्म क्षेत्र पनि धरासयी बनेपछि यसको असर प्रभासमा पनि देखिएको हो । उनको प्रोडक्सन कम्पनी यूवी क्रिएसनले बैंकमा लिएको ऋण तिर्न धौ धौ परिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्...
बक्सअफिसमा एकैदिन तीन ठूला स्टार भिड्दै
मुम्बई &ndash; सन् २०२१ बलिउडका लागि विशेष छ, किनकी यो वर्ष मेगा बजेटका थुप्रै फिल्म प्रदर्शनको तयारीमा छन् । बलिउड अभिनेता अजय देवगनको &lsquo;मैदान&rsquo; र साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर र राम चरण अभिनित फिल्म &lsquo;आरआरआर&rsquo; एकैदिन रिलिज हुँदैछन् । यहीबीचमा यी दुई फिल्म रिलिज भएकै दिन हलिउड स्टार डेनियल क्रेगको अन्तिम...
उत्कृष्ट बेली डान्सर नोरा फतेहीको आकर्षक रुप (तस्बिरमा हेरौं)
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 10th February 2021
एजेन्सी - बलिउड अभिनेत्री तथा नृत्यंगना नोरा फतेही अहिले चर्चामा छिन । मोडलिङ क्षेत्रमा पनि राम्रै स्थान बनाइसकेकी नोरा यतिबेला आकर्षक तस्विरहरुका कारण चर्चामा आएकी हुन । सन १९९२ फेब्रुअरी ६ मा क्यानाडाको टोरन्टोमा जन्मिएकी नोरा उत्कृष्ट पोशाक छनौटको मामिलामा अब्बल सावित भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन । सामाजिक सञ्जालमा निकै...
बलिउडका अभिनेता ऋषि कपुरका भाइ राजिव कपुरको निधन
नयाँदिल्ली &ndash; बलिउड अभिनेता राजिव कपुरको निधन भएको छ। मंगलबार हृदयघात भएपछि ५८ वर्षीय कपुरको निधन भएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। उनी कलाकार तथा निर्माता राज कपुरका कान्छो छोरा हुन्। उनी ऋषि कपुर र रंधिर कपुरका भाइ हुन्। ऋषि कपुरकी श्रीमती तथा अभिनेत्री नितु कपुरले इन्स्टाग्राममा फोटो राखेर राजिव कपुरको मृत्युको जानकारी...
अभिनेत्री ज्याक्लिनले किनिन् प्रियंका चोपडाको घर
एजेन्सी &ndash;बलिउड अभिनेत्री ज्याक्लिन फर्नान्डिजले प्रियंका चोपडाको घर किनेकी छन्। भारतीय अखबार बलिउड हंगामाका अनुसार ज्याक्लिनले मुम्बईस्थित प्रियंकाको घर भारू ७ करोडमा किनेकी हुन्। ज्याक्लिन लामो समयदेखि मुम्बईस्थित बान्द्राको एक अपार्टमेन्टमा डेरा गरेर बसेकी थिइन्। उनी दुई वर्ष अघिदेखि नै घरको खोजीमा पनि थिइन्। तर उनले भने जस्तै घर पाएकी थिइनन्।...
छोरीभन्दा आमा तरुनी( तस्बिरमा हेर्नुहोस्)
एजेन्सी &ndash; भारतीय टिभी सिरियलकी चर्चित अभिनेत्री श्वेता तिवारी पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएकी छिन । कुनै टेलिसिरियल वा फिल्मका कारण श्वेताको चर्चा चुलिएको हैन । उनले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको तस्विरहरुका कारण श्वेताको चर्चा बढेको हो । जवान छोरीकी आमा श्वेतालाई बुढेसकालले पटक्कै छोएको छैन । उमेर जति बढ्दैछ, त्यती नै...
रिहानालाई कंगनाले भनिन्- 'अंग प्रदर्शन गर्दै क्यामरा अगाडि नाच्ने गायिका'
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 05th February 2021
मुम्बई &ndash; यतिबेला भारतमा जारी किसान आन्दोलन चर्किरहेको छ। उक्त विषयबारे भारतीय कलाकारको मात्र होइन, हलिउड कलाकार र अभियन्ताहरूले पनि चासो देखाइरहेका छन्। केही समयअघि अमेरिकी पप गायिका रिहानाले भारतीय किसान आन्दोलनबारे ट्विट गरेकी थिइन्। रिहानाले मंगलबार सिएनएनमा प्रकाशित समाचार सेयर गर्दै रिहानाले सिएनएनमा प्रकाशित समाचार सेयर गर्दै भारतीय किसान आन्दोलनबारे...
रणवीर र आलिया दोस्रो पटक पनि एकसाथ पर्दामा देखिने
एजेन्सी &ndash; बलिउड अभिनेता रणवीर सिंह र अभिनेत्री आलिया भट्टको फिल्म &lsquo;गली बाँय&rsquo; २०१९ मा रिलिज भएको थियो । फिल्मले सफलता पाएपछि उनीहरु दोस्रो पटक पनि एकसाथ पर्दामा देखिने भएका छन् । समाचार अनुसार करण जौहरले निर्माण गर्ने नयाँ फिल्ममा दुई कलाकार एकसाथ अभिनय गर्ने भएका हुन् । रिपोर्ट अनुसार निर्माता...
अभिनेत्री जरिनको गुनासो- 'कोही मानिस मलाई सन्नी लियोनी त कोही कट्रिना जस्तो भन्छन्,डुब्लिकेट देखिदा गाह्रो भयो'
मुम्बई &ndash;बलिउड नायिका जरिन खानले सन् २०१० मा नायक सलमान खानसँग चलचित्र &lsquo;विर&rsquo;मा काम गरिन् । तर, ११ बर्ष लामो बलिउड यात्रामा उनले सफलता पाउन सकेकी छैनन् । जरिनको अनुहार अर्की नायिका कट्रिना कैफको जस्तो रहेको भन्दै तुलना हुने गर्दछ । यसैले पनि आफूलाई बलिउडमा सफल हुन समस्या परेको जरिनले...
करिना कपूरको ‘बेबी बम्प’को चर्चा : पेटको आकार हेरेर फ्यानले सोधे- जुम्ल्याहा छन् र ?
मुम्बई - बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री हुन् करीना कपूर । नयाँ फिल्म र फोटोशुटका कारण चर्चामा आइरहने करिना दोस्रो पटक आमा बन्दै छिन् । छोरा तैमुरलाई जन्म दिएको करिब ४ वर्षपछि फेरि परिवारमा नयाँ सदस्य थप गर्न लागेको उनीहरुले औपचारिक जानकारी दिइसकेका छन् । उनको गर्भावस्थाको फोटो र भिडियोहरु भाईरल भइरहेको छ । गर्भावस्थाको...
‘सर्कस’मा रणवीरले लिए ५० करोड पारिश्रमिक
काठमाडौं &ndash; बलिउड नायक रणवीर सिंहको क्रेज गज्जबको छ । चलचित्रमा उनले गरेको अभिनयको पनि खुलेरै प्रशंसा हुने गरेको छ । रणवीर हरेक भूमिकामा फिट हुनसक्ने नायक हुन् । यसैले पनि रणवीर सिंहलाई लिएर चलचित्र बनाउन बलिउडका ठूला ब्यानर लालयित छन् । उनै, रणवीर चलचित्र &lsquo;सर्कस&rsquo;को छायांकनमा व्यस्त छन् । यो...
कालो वर्ण भएकै कारण अमेरिकाबाट फर्कन बाध्य भईन प्रियंका चोपडा
एजेन्सी &ndash; बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडा हाल अमेरिकी गायक निक जोन्सका साथ विवाह गरेर अमेरिकामा बसोबास गरिरहेकी छिन्। प्रियंकाले बलिउडमा मात्र नभई हलिउड फिल्म उद्योगमा पनि तहल्का मच्चाइसकेकी छिन्। तर प्रियंकाले कुनै बेला भारतीय मूलकी र कालो वर्णको भएकै कारण अमेरिकाबाट आफ्नो पढाइ नै छोडेर भारत फर्किनुपरेको थियो। प्रियंकाले हालै पीपल...
एजेन्सी &ndash; कन्नाडा अभिनेत्री तथा बिग बोस कन्नाडा सिजन ३ की प्रतिष्पर्धी जयश्री रमैयाहले आत्महत्या गरेकी छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उनले सोमबार बैङ्लुरूस्थित आफ्नो कोठामा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन्। उनको शव पोष्टमर्टमका लागि अस्पताल पठाइएको र आत्महत्याको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको बैङ्लुरू प्रहरीले जनाएको छ। जयश्री डिप्रेसनमा थिइन्। उनले यसअघि गत वर्ष जुलाईमा सामाजिक...
करिनाको प्रेगनेन्सी फोटोसुट(तस्बिरमा हेर्नुस्)
काठमाडौं &ndash; बलिउड सेलेब्समाझ गर्भवती फोटोसुट सामान्य हुन थालेको छ । प्रेगनेन्ट नायिकाले बेबी&ndash;बम्पसहितको फोटोसुट गर्न थालेका छन् । अनुष्का शर्मापछि अब दोस्रोपटक ममी बन्न लागेकी करिना कपुर पनि सोही बाटोमा लागेकी छन् । करिनाको बेबीबम्प फोटोसुट हेर्दा लाग्छ, प्रेगेनेन्ट फोटो पनि सुन्दर र प्लेफूल लाग्छ । इन्स्टग्राम एकाउन्टमार्फत...
मेरो सपना थियो आफ्नै कमाइले एउटा घर किन्न सकुँ,त्यो आज आएर पुरा गरेकी छु : सोनाक्षी
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 25th January 2021
काठमाडौं &ndash; बलिउडका विवाहित हुन् या अविवाहित कलाकार । उनीहरु, बलिउडमा सफल हुँदै गएपछि आफैले किनेको घरमा रमाउन चाहन्छन् । परिवारसँग अलग भएर आफ्नै दुनियाँमा रमाउने कलाकारहरुको संख्या बलिउडमा धेरै छ । रणवीर कपुर, आलिया भट्ट, जाहन्वी कपुर लगायतका कलाकारले गतबर्ष मुम्बइमा घर किनेका थिए । अब, यो सूचीमा नायिका...
बिबाह बन्धनमा बाँधिए नायक बरुण धवन
काठमाडौं &ndash; बलिउडका सफल नायक बरुण धवन बिबाह बन्धनमा बाँधिएका छन् । उनले, आफ्नी प्रेमिका नताशा दलालसँग आइतबार बिहे गरेका हुन् । अलिबाग रिसोर्टमा आयोजित समारोहमा बरुण र नताशाले एक अर्कासँग जीवन एकसाथ बिताउने बाचा गरे । बरुण र नताशाको बिहेमा उनीहरुका आफन्त, परिवारका सदस्य र केही बलिउडकर्मी मात्र उपस्थित थिए...
सन्नी लियोनको बाल्यकालको तितो अनुभव -'मलाई केही कुराले जीवनभर सताउँछ पनि होला, ‘बुली’ चाँडै फैलन्छ'
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 22nd January 2021
एजेन्सी &ndash; चर्चित भारतीय कलाकार सन्&zwj;नी लियोनले आफ्नो बाल्यकालको तितो अनुभवको बारेमा कुराकानी गरेकी छन्। उनको बाल्यकालको केही डरलाग्दो अनुभूति भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन भएका छन्। उनले बाल्यकालमा आफ्नो रुपको कारणले &lsquo;बुली&rsquo; हुने गरेको बताएकी छन्। करणजीत कोरको रुपमा जन्म भएकी सन्&zwj;नीको शिख परिवारमा हुर्काइ भयो। उनी क्यानडामा हुर्किएकी हुन्। उनी...
प्रेमिका नताशासँग विवाह बन्धनमा बाँधिदै अभिनेता वरुण धवन
काठमाडौ &ndash; बलिउड अभिनेता वरुण धवन आगामी आइतबार (जनवरी २४) विवाह बन्धनमा बाँधिने भएका छन्। उनले प्रेमिका नताशा दलालसँग विवाह गर्न लागेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। वरुणको विवाहको तयारी जोडतोडका साथ भइरहेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण विवाह समारोह सामान्य हुनेछ। कोरोनाबाट जोगिन स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर विवाह कार्यक्रम गर्न लागिएको हो। परिवारका...
१० करोडमा घर बेच्दै करिष्मा कपुर
एजेन्सी &ndash; करिना कपुरकी दिदी करिष्मा कपुरले मुम्बईस्थित आफ्नो घर बेच्न लागेको खबर छ । करिष्माले यसबारे कुनै पुष्टि त गरेकी छैनन् तर भारतीय सञ्चार माध्यमले बेच्नका लागि उनले आफ्नो घर रजिस्टर गरेको जानकारी दिएका छन् । डीएनएको खबर अनुसार करिष्मा कपुरले आफ्नो घर बेच्नका लागि २४ डिसेम्बर २०२० मा रजिस्टर...
नायिका जाह्नवीले दुई फिल्म खेलेरै किनिन् ३९ करोडको घर
मुम्बई - श्रीदेवी र बोनी कपुरकी छोरी जाह्नवी कपुरका दुई फिल्म रिलिज भएका छन्। धडक र गुञ्जन सक्सेना ः द कारगिल गर्ल नामक उनका फिल्म प्रदर्शनमा आएका हुन्। दुई फिल्म रिलिज भएपछि हालै उनले मुम्बईमा घर किनेकी छन् जसको मूल्य सुन्दा उनका फ्यानले जिब्रो टोकेका छन्। उनले ३९ करोड रुपैयाँमा...
नायिका अनुष्का र क्रिकेटर विराट कोहलीलाई पुत्रीलाभ
मुम्बई - बलिउड नायिका अनुष्का शर्मा र क्रिकेटर विराट कोहलीलाई पुत्री लाभ भएको छ । विराटले सामाजिक संजालबाट आफूहरुलाई पुत्री लाभ भएको र अनुष्का र छोरीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको उल्लेख गरेका छन् । विराटले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्&ndash;&lsquo;हामी दुबै जना निकै खुशी छौ किनकी आज हामीलाई पुत्री लाभ भएको छ...
लद्दाख पुगेर फर्किए अभिनेता अमिताभ बच्चन
एजेन्सी &ndash; बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन माइनस ३३ डिग्री तापक्रम रहेको लद्दाख पुगेका छन्। ७८ वर्षीय अमिताभले बुधबार आफ्नो ट्विटरमा तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उक्त कुरा खुलाएको भारतीय अखबार डिएनएले जनाएको छ। अमिताभले चिसो मौसममा लगाइने बाक्लो कपडा र चस्मा लगाएको फोटो सेयर गर्दै ट्विट गरेका हुन्। जसमा लेखेका छन्, &lsquo;लद्दाख पुगेँ...
मलाइकाको हट तस्वीर
काठमाडौं &ndash; बलिउडकी हट आइटम गर्ल मलाइका अरोरा खानको चर्चा उनको तस्वीरका कारणले पनि हुने गर्दछ । विशेषगरि, मलाइका जीम पुग्दा होस् या सार्वजनिक कार्यक्रममा पुग्दा नै किन नहोस्, बोल्ड पहिरन लगाउन माहिर मानिन्छिन् । बलिउडमा &lsquo;मुन्नी&rsquo; उपनामले परिचित यी सुन्दरी नायक अर्जुन कपुरको प्रेममा छिन् । उनै, मलाइकाले आफ्नो सामाजिक...
सलमानले मनाए बिग बोसको सेटमै आफ्नो जन्मदिन
‘धमाका’को छायांकन १० दिनमै सकियो, आर्यनको मुख्य भूमिका रहने
काठमाडौँ ।भारतिय नायक कार्तिक आर्यनको भूमिका रहेको चलचित्र &lsquo;धमाका&rsquo;को छायांकन १० दिनको छोटो अवधिमा सकिएको छन् ।जसको फस्टलुक उनले केही समय अघि मात्र सार्वजनिक गरेका थिए । यो चलचित्रको छायांकनका लागि ३ सय जनाको यूनिटलाई एउटा होटलमा राखिएको थियो । चलचित्रका निर्देशक राम माधवानीले छायांकन अगाडि नै सबै तयारी पुरा गरेका...
बल्ल २५ वर्षकी त भए,विवाह गर्न हतार छैन : आलिया
मुम्बई &ndash; बलिउडमा अभिनेता रणवीर कपुर र अभिनेत्री आलिया भट्टलाई सुन्दर जोडीका रुपमा लिने गरिन्छ । प्रेमसम्बन्धमा रहेको केही समयदेखि नै रणवीर र आलियाले विवाह गर्न लागेको चर्चा चल्ने गरेको थियो । अझ रणवीरका पिता अभिनेता ऋषि कपुर बिरामी भएको समयमा आलिया लन्डन मै बसेर हेरचाह गरेका कारण हल्लालाई बल मिलेको...
अभिनेता सैफ अलि खान विरुद्ध मुद्दा दायर
एजेन्सी &ndash; बलिउड कलाकार सैफ अलि खान आउदै गरेको फिल्म &lsquo;आदिपुरष&rsquo; मा पौराणिक चरित्र रावणलाई लिएर उनले गरेको टिप्पणीले सामाजिक सञ्जालमा हलचल मच्चिएको थियो । त्यस विषयमा सैफले माफि मागेर मानिसहरुको रिस शान्त बनाएका थिए । तर, फेरी उनीमाथि युपीका एक वकिलले मुद्दा दायर गरेका छन् । सैफ र निर्देशक...
गुगलमा सर्वाधिक खोजिएकी कनिका
एजेन्सी &ndash;गुगलले सन् २०२० मा सर्वाधिक खोजिएका व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ । भारतमा सर्वाधिक खोजिएका व्यक्तिहरुको सूचीमा जो वाइडेनको नाम पहिलो स्थानमा छ । यो बर्ष सर्वाधिक खोजिने बलिउडकर्मीमा गायिका कनिका कपुर छिन् । कोरोनाबाट संक्रमित भएको खबरसँग उनको बिषयमा धेरै खोजिएको थियो । यस्तै, कोरोना संक्रमित भएपछि पनि लुकाएको,...
बलिउडमा इन्ट्री गर्दै अभिनेता आमिर खानका छोरा जुनैद
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 11th December 2020
मुम्बई &ndash; बलिउड अभिनेता आमिर खानका छोरा जुनैद खान अब छिट्टै बलिउडमा डेब्यु गर्न लागेका छन् । भारतीय मिडियाहरूमा प्रकाशित समाचार अनुसार जुनैद यशराज फिल्मसको ब्यानरमा बन्ने फिल्मबाट बलिउड डेब्यु गर्दैछन् । फिल्ममा &lsquo;अर्जुन रेड्डी&rsquo; फेम कलाकार शालिनी पाण्डेको पनि भूमिका रहने जनाइएको छ । आजतकले सूत्रको हवाला दिँदै जुनैद र शालिनीलाइ फिल्ममा...
रणवीर बसेकै अपार्टमेन्टमा आलियाले किनिन् ५० करोडको फ्ल्याट
मुम्बई &ndash;गत वर्ष बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट र रणवीर कपुरले आफ्नो सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरे। दुईको सम्बन्ध धेरैका लागि चर्चाको विषय बन्यो। यी दुईको अब मनले मात्रै निकट छैनन्। बलिउड हंगामाअनुसार, आलियाले रणवीर बसेको अपार्टमेन्ट भवनमै करिब ५० करोड रूपैयाँको नयाँ फ्ल्याट किनेकी छन्। आलियाले भारू ३२ करोडमा किनेको यो उनको...
‘आशिकी’अभिनेता राहुल रोयलाई ब्रेन स्ट्रोक,आइसियूमा उपचार हुँदै
मुमबई &ndash; सन् १९९० को सुपरहिट बलिउड सिनेमा आशिकीका अभिनेता राहुल रोयलाई ब्रेन स्ट्रोक भएको छ। उनलाई कारगिलमा आधारित सिनेमा एलऐसी&ndash;लिभ द ब्याटको सुटिङका दौरान ब्रेन स्ट्रोक भएको हो। हाल उनको मुम्बईस्थित नानावती अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ५४ वर्षीय अभिनेता रोयलाई ७ दिन अगाडि सुटिङका क्रममा ब्रेन स्ट्रोक भएको भारतीय संचारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। उनलाई...
हिरोका श्रीमतीहरूकै कारण तापसीले फिल्म खेल्न पाइनन!
मुम्बई &ndash; बलिउड नायिका तापसी पन्नूले आफ्नो संघर्षको क्रममा भोगेका समस्याबारे भर्खरै खुलासा गरेकी छन । तापसीका अनुसार चलचित्र छायांकनको क्रममा उनले कैयौँ पटक आफ्नो डायलग नै परिवर्तन गर्नुपर्यो भने कति पटक त हिरोको तुलनामा पारिश्रमिक घटाउनुपरेको छ । कति पटक निर्माताहरूले उनलाई &lsquo;रिजेक्ट&rsquo; नै गरेका थिए । त्यति मात्र...
माल्दिभ्समा दिशाको हट लुक्स(तस्बिरमा हेर्नुस्)
एजेन्सी &ndash; बलिउड नायिका दिशा पटानी होलिडे मनाउनका लागि माल्दिभ्स पुगेकी छिन् । माल्दिभ्स पछिल्लो समयमा बलिउड कलाकारका लागि होलिडे मनाउने मुख्य गन्तव्य पनि बनिरहेको छ । दिशा र उनका प्रेमी टाइगर श्राफ पनि माल्दिभ्समा छन् । माल्दिभ्समा पुगेकी दिशाले सामाजिक संजालमा केही हट तस्वीर शेयर गरेकी छिन्, जसले अहिले सामाजिक...
भारती र हर्षको पक्राउपछि बलिउडका कमेडियनहरुको यस्तो प्रतिक्रिया
एजेन्सी&ndash; बलिउड नायक सुशान्तसिंह राजपूतको मृत्युपछि वलिउड लागुपदार्थ सेवनलाई लिएर विवादमा तानिएको छ। सारा अलिखान, दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल हुँदै अहिले लागुपदार्थ सेवनको घटना कमेडियन भारती सिंह र उनको पति हर्ष लिम्बाचियासम्म जोडिन पुगेको छ। लागुपदार्थ सेवनको आरोपमा नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी)ले शनिबार भारती र आइतबार उनको पति हर्षलाई पक्राउ गरेको थियो।...
प्रख्यात हास्य कलाकार भारती सिंहको पति पक्रउ परे पछी सिंह पनि एनसीबीको संखाको घेरामा
एजेन्सी । लागूऔषध अनुसन्धान एजेन्सी (एनसीबी) आज प्रख्यात हास्य कलाकार भारती सिंहको पतिलाई पक्रउ गरेको छ । एनसीबीले प्रख्यात हास्य कलाकार भारती सिंह र उनका पति हर्ष लिम्बाचियाको घरमा शनिबार बिहान छापा मारेको थियो । छापा मारिएपछि एनसीबीले उनिहरु दुवैलाई सोधपुछका लागि कार्यालयमा लगेको हो । एनसीबीले भारती सिंहको घरबाट लागु...
एजेन्सी । बलिउडमा बोल्डनेसको सबै सीमा तोड्ने कुरामा विश्वास राख्ने नायिका एमी ज्याक्सन एकपटक पुनः चर्चामा आएका छिन् । एमीको सोसल मिडियामा एउटा फोटो निकै चर्चित भएको छ । फोटोमा एमी टपलेस देखिएकी छिन् । नायिकाले हालै आफ्नो एउटा सुन्दर फोटोसुट गराएकी थिइन् । उक्त फोटोसुटको एउटा फोटो एमीले इस्टाग्राममा...
काठमाडौं&nbsp; &ndash; साउथ चलचित्र तथा बलिउडकी सफल नायिका काजल अग्रवालले अक्टबुर ३० मा आफ्ना प्रेमी गौतम किचलुसँग बिहे गरिन् । मुम्बइको एक महंगो होटलमा आफन्त, साथीभाई र परिवारको उपस्थितीमा भएको बिहेले चर्चा पायो । कोभिडका कारण काजलले भव्य तरिकाले आफ्नो बिहे गरिनन् । बिहेपछि भारतको एक म्यागेजिनसँग कुरा गर्दै काजलले आफूहरु...
कंगना व्यक टु स्क्रीन
बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौट लामो समयपछि काममा फर्केकी छिन् । कंगनाले फेरि आफ्नो सुर्टिङ प्रोजेक्टमा काम सुरु गरेकी हुन् । उनले लामो समयपछि सुर्टिङ गरेको तस्वीर सेयर गरेकी छिन् । Good morning friends, these are some stills from yesterday&rsquo;s early morning scene discussion with my absolutely talented and...
एजेन्सी &ndash; नायिका दीपिका पादुकोणले केही दिनयता कानुनी झमेला भोगिरहेकी छिन् । नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधनपछि उत्पन्न परिस्थितीले उनलाई कानुनी घेरामा ल्याएको हो । सुशान्तको निधनको मुद्दा ड्रग्ससँग जोडिएपछि दीपिका लगायत केही नायिकाको नाम यसमा मुछिएको छ । शनिबार बलिउडका केही नायिकासँग भारतको नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरोले बयान लियो । बयानका...
काठमाडौं &ndash; नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधनपछि बलिउडमा नयाँ नयाँ तरंग सार्वजनिक भैरहेको छ । पछिल्लो समयमा सुशान्तकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती पक्राउ परेसँगै ड्रग्सको नयाँ नयाँ मुद्दा सार्वजनिक भएको हो । बलिउडका केही चर्चित अनुहारहरु पनि ड्रग्सको मुद्दामा तानिएका छन् । यसैविच, नायक सुशान्त सिंह राजपुत र नायिका रिया चक्रवर्तीकी मेनेजर...
काठमाडौं &ndash; बलिउड नायिका मलाइका अरोडा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएकी छिन् । उनले, आफू कोरोना संक्रमित भएको १४ दिनपछि ठिक भएको बताएकी हुन् । सेप्टेम्बर ७ मा नायक अर्जुन कपुर र नायिका मलाइका अरोडामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टी भएको थियो । यसपछि, उनीहरु होम क्वारेन्टाइनमा रहँदै आएका छन् । मलाइकाले सामाजिक संजालमा...
अनुराग कश्यपमाथि अभिनेत्री पायलले लगाइन् यौन उत्पीडनको आरोप
एजेन्सी &ndash; बलिउड अभिनेत्री पायल घोषले चलचित्रकर्मी अनुराग कश्यपमाथि यौन उत्पीडनको आरोप लगाएकी छन्। पायल घोषले अनुराग कश्यपलाई मेन्सन गरेर ट्वीटरमा लेखेकी छन्, &lsquo;अनुराग कश्यपले म सँग जबरजस्ती गर्ने प्रयास गरेका थिए। नरेन्द्र मोदी जी तपाईँसँग अनुरोध छ कि यीनलाई कानूनी कारबाही होस् र देशलाई थाहा होस् वास्तविकता के हो ।...
रवि र क‌ंगनालाई लक्षित गरी जयाले भनिन्-‘जुन थालमा खायो त्यही थालमा प्वाल पार्ने?जयाको समर्थनमा हेमा मालिनी पनि
एजेन्सी - अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्यु सम्बन्धी मुद्दामा ड्रस एंगल आएसँगै बलिउडमा भुईँचालो आएको छ। यो विषय एउटा विवाद मात्र सीमित थियो तर अहिले यो मुद्दा बलिउडभरि फैलिसकेको छ। यो मुद्दामा सदनमा समेत बहस हुन थालेको छ। राज्यसभामा जया बच्चनले रवि किशन र क&zwnj;ंगना रनौतलाई लक्षित गरी &lsquo;जुन थालमा खायो त्यही...
मनाली फर्किनु अगाडि कंगनाले लेखिन्-'भारी मन लिएर म फर्किदैछु,मलाई कमजोर संझिएर निकै ठूलो भुल गर्दैछन्'
काठमाडौं &ndash; ५ दिन अगाडि मनालीबाट मुम्बई आएकी बलिउड नायिका कंगना रनावत फेरि आज आफ्नै घर मनाली फर्किएकी छिन् । बीएमसीले अवैध निर्माण भएको भन्दै उनको अफिस तोडफोड गरेपछि उनी मुम्बई आएकी थिइन् । मुम्बई आएपछि कंगनाले महाराष्ट्र सरकारको विरुद्धमा आवाज उठाइन् । मनाली फर्किनु अगाडि ट्विट गर्दै कंगनाले लेखेकी छिन्&ndash;&lsquo;भारी...
मोडल डिम्पल पालले लगाईन साजिद खानमाथि यौन उत्पिडनको आरोप
एजेन्सी &ndash; सन् २०१८ मा विश्वभर &lsquo;मि टू&rsquo; अभियान चल्यो । सो समयमा आफूमाथि भएको यौन उत्पिडनको घटनालाई धेरै कलाकारले बाहिर ल्याए । बलिउडका केही नाम चलेका कलाकारमाथि महिला कलाकारहरुले यौन उत्पिडनको आरोप लगाएका थिए । सो समयमा बलिउड निर्देशक साजिद खानमाथि ४ जना मोडलले यौन उत्पिडनको आरोप लगाएका थिए ।...
अभिनेत्री कंगनाको अफिसमा चल्यो डोजर
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 09th September 2020
काठमाडौं - बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतको मुम्बईस्थित कार्यालयमा डोजर चलेको छ। अवैध ढंगले निर्माण गरिएको भन्दै मुम्बई महानगरले कंगनाको कार्यालय भवनमा डोजर चलाएको हो। कंगना रनौतले ट्वीट गरेर घटनाप्रति विरोध जनाएकी छन्। उनले एकपटक फेरि मुम्बई प्रहरीको तुलना &lsquo;पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर&rsquo; सँग गरेकी छन्। उनको पछिल्लो यो अभिव्यक्तिले हंगामा मच्चिएको थियो । कंगना...
सुशान्त प्रकरण : रिया चक्रवर्ती पक्राउ
मुम्बई &ndash; सुशान्त सिंह राजपूतकी पूर्वप्रेमिका तथा भारतीय कलाकार रिया चक्रवर्तीलाई नार्कोटिक्स कन्ट्रोल ब्युरो (एनसीबी)ले पक्राउ गरेको छ । मंगलवार एनसीबीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । भारतीय मिडिया जी न्यूजका अनुसार रियाले सुशान्तलाई लागूऔषध दिइएको आरोपमा पक्राउ गरेको हो । यो केशमा यसअघि प्रहरीले अन्य केहीलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 30th August 2020
भारतीय चलचित्र उद्योग बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुर अहिले आफ्नो हट अवतारका कारण चर्चाको शिखरमा छिन । सन २००७ मा साँवरिया फिल्मबाट डेब्यु गरेकी ३३ बर्षीया कपुर अहिले बलिउड फेसन आईकनको रुपमा स्थापित भएकी छिन । उनले लगाउने हरेक लुगा फेसनको दुनियाँमा ट्रेण्डिङको स्तरमा पुग्छ । सन २०१८ मा आनन्द अहुजासंग...
सुशान्तका वकिलले भने- 'रियाले दोहोरो गेम खेल्दैछिन्'
मुम्बई &ndash; केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीआइबी) को विशेष टिमले सुशान्त सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणबारे सबै कोणबाट जाँच गरिररहेको छ । लामो समय भइसक्दा पनि सुशान्तको आत्महत्याको कारण खुल्न सकेको छैन । यस घटनासँग जोडिएका घटनाका बारेमा दैनिक समाचार आइरहेका छन् । यसैबीच सुशान्तको परिवारको केश हेरिरहेका विकास सिंहले रिया चक्रवर्तीमाथि आरोप लगाएका...
आमिर खानमाथी कंगनाको हमला
एजेन्सी &ndash; बलिउड नायिका कंगना रनौत आफ्नो बयानका लागि धेरैजसो चर्चामा रहन्छिन् । यसका साथै उनी विवादास्पद विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न हिच्किचाउँदिनन् । हालै उनले आमिर खानमाथि कटाक्ष गरेकी छिन् । कंगना रनौतको टिमले ट्वीटर ह्यान्डलमा आमिर खानको एउटा पुरोना अन्तरवार्ता सेयर गरेको छ । यसमा आमिर खानले आफ्नो नीजि...
५० वर्षको उमेरमै अस्ताए फिल्म निर्देशक कामत
एजेन्सी &ndash; &lsquo;दृश्यम&rsquo;, &lsquo;मुम्बई मेरी जान&rsquo; का निर्देशक निशिकान्त कामतको ५० वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको उपचार भइरहेको एआईजी अस्पतालले बयान जारी गर्दै सोमबार बेलुका करिब साढे चार बजे उनको निधन भएको जानकारी दिएको छ । उनी पछिल्लो दुई वर्षदेखि लिभर सिरोसिस रोगबाट ग्रसित थिए । उनी जुलाई ३१ देखि...
अभिनेत्री करिना कपुर दोस्रोपटक आमा बन्दै
एजेन्सी&ndash; बलिउड अभिनेत्री करिना कपुर दोस्रोपटक आमा बन्ने भएकी छन्। करिना आमा बन्न लागेको चर्चा केही समययता चलिरहे पनि पछिल्लो समय भने खान परिवारले नै सामाजिक सञ्जालमार्फत आधिकारिक रूपमा करिना आमा बन्न लागेको जानकारी गराएका हुन्। करिनाले पहिलो सन्तानका रूपमा सन् २०१६ मा छोरा तैमुरलाई जन्म दिएकी थिइन्। हाल तैमुर ३...
मान्यता भन्छिन्- 'सञ्जय दत्तका लागि प्रार्थना गर्नु होला,अफवाह वा अड्कलको पछि नलाग्नु होला'
काठमाडौं &ndash; फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित भएका बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तकी श्रीमती मान्यता दत्तले कुनै पनि प्रकारको अफवाह नफैलाउन र त्यसको पछि नलाग्न अपिल गरेकी छन् । उनले बुधबार एक वक्तव्य जारी गरेर सञ्जय दत्तको शीघ्र स्वास्थ्य लाभका लागि कामना गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेकी छन् । उनले लेखेकी छन्, &lsquo;म सञ्जुका फ्यानसँग...
किक २ बनाउने घोषणा
लकडाउनको समयमा नायक सलमान खान आफ्नो फार्म हाउसमा रहे । उनीसँगै नायिका ज्याकलिन फर्नान्डेज, उनका सहयोगीहरु प्नि फार्म हाउसमै थिए । उनै, सलमान सोमबार मात्र आफ्नो घर फर्किएका छन् । मंगलबार नायिका ज्याकलिन फर्नान्डेजले आफ्नो जन्मदिन मनाइन् । उनको जन्मदिनको अवसरमा निर्माता तथा निर्देशक साजिद नाडियाडवालाले चलचित्रको घोषणा गरे । साजिले...
बलिउड नायक संजय दत्तलाई तेश्रो चरणको क्यान्सर भएको छ । उनलाई फोक्सोको क्यान्सर भएको हो । उनी, अब उपचारका लागि अमेरिका उड्नेछन् । केही दिन अगाडि श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनको कोरोना रिपोर्ट पनि नेगिटिभ आएको थियो । भारतीय मिडियाका अनुसार, क्यान्सरको खबरले संजय स्तब्ध बनेका...
बलिउडलाई अर्को झट्का, अभिनेत्रीले अनुपमाले गरिन् आत्महत्या
काठमाडौं &ndash; भोजपुरी एक्ट्रेस अनुपमा पाठकले आत्महत्या गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।उनले मुम्बईस्थित आफ्नै फ्ल्याटमा झुढिडएर आत्महत्या गरेकी हुन् । ४० वर्षीया अभिनेत्रीको आत्महत्याले फेरी एकपटक बलिउड शोकमा डुबेको छ । उनी आफ्नो मृत्युको एक दिन अगाडि सोसल मिडियामा लाइभ आएकी थिइन् । उनले लाइभमा आफ्ना फ्यान्सलाई आफ्ना दुखका कुरा...
सुशान्त प्रकरण : रिया चक्रवर्तीले भनिन्- ‘तत्काल बयान नलिइयोस्’
एजेन्सी &ndash; बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृत्यु घटनामा आरोपहरुबाट घेरिएकी नायिका रिया चक्रवर्तीले प्रवर्तन निर्देशालय अर्थात ईडीलाई तत्काल आफ्नो बयान नलिन आग्रह गरेकी छन्। उनले आफ्नो याचिका सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताउँदै त्यसको आदेश आएपछि मात्रै बयान लिन आग्रह गरेकी हुन्। तर उनको यो आग्रह अस्वीकृत भएको छ। ईडीले रिया...
सुशान्त प्रकरण : ‘फरार’ भएकी रिया अपार्टमेन्टमा देखिइन्
मुम्बई &ndash; बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधनपछि बलिउडमा विभिन्न विषयमा बहस भइरहेको छ । प्रहरीले सुशान्तले आत्महत्या गर्नुको कारण पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । सुशान्त केशमा कलाकार रिया चक्रवर्तीलाई पनि शंकाको घेरामा तानिएको छ । उनीविरुद्ध सुशान्तका पिताले उजुरी दिएका छन् ।रिया प्रहरीको खोजी सूचीमा थिइन् । र,...
चर्चित मोडल पुनम पाण्डेको समिपमा बस्ने यी व्यक्ति को हुन ?
एजेन्सी - आफ्नो बोल्ड भिडियो र फोटोका कारण सँधै चर्चामा रहने बलिउड अभिनेत्री हुन् पूनम पाण्डे । उनले हालैमा आफ्नो प्रेमी सैम बम्बेका साथ इन्गेजमेन्ट गरेकी छन् । पुनम र सैम आफैले यसबारे सामाजिक सञ्जालमा जानकारी दिएका छन् । इन्गेजमेन्टको औंठीका साथमा पुनम र सैले लिएको सेल्फीलाई सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेका...
अभिनेता अमिताभ बच्चन डिस्चार्ज
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन कोरोनामुक्त भएपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । उनले आफैं फेसबुकमार्फत आफ्नो पछिल्लो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिएका हुन् । बच्चनका अनुसार उनी अब केहीसमय आफ्नै घरमा आइसोलेसनमा रहनेछन् । कोरोना संक्रमण देखिएपछि बच्चन मुम्बईको नानावती अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । उनीसँगै छोरा अभिषेक, बुहारी ऐश्वर्या र...
रियाको बयान–‘सुशान्तको परिवारले मलाई फसाउन खोज्दैछन्’
एजेन्सी - नायिका रिया चक्रवर्तीले भारतको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिदै आफूलाई नायक सुशान्त सिंह राजपुतको परिवारले फसाउन खोजेको बताएकी छिन् । सुशान्तका पिताले पटना प्रहरीमा दर्ता गरेको एफआइआरमा रियाले सुशान्तलाई मृत्युको मुखमा पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ । तर, रियाले भने आफूमाथि लागेको सबै आरोप झुटो भएको बताएकी हुन् । भारतीय मिडियाका अनुसार,...
सुशान्त प्रकरणमा नयाँ खुलासा : अफिस ब्यायले भने-'रियाले टुनामुना गर्थिन्'
नयाँ दिल्ली &ndash; सुशान्त सिंह राजपूतको आत्महत्याको गुत्थी सुल्झिने नाम लिएको छैन । बरु यो मुद्दामा एकपछि अर्को गर्दै खुलासा भइरहेका छन् । सुशान्तका पिताले रिया चर्कवर्तीका विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । मुम्बई प्रहरीसँगै अब बिहार प्रहरी पनि सुशान्तको आत्महत्याको कारण पत्ता लगाउने प्रयास गरिरहेको छ । सुशान्तका अफिस ब्यायले हालै...
अभिनेत्री काजलले सर्जरी गरेर स्तनको आकार बढाएपछि खिचाएका तस्विर भाइरल
एजेन्सी - साउथ नायिका काजल अगरवालको चर्चा ब्यापक बन्दै गइरहेको छ । साउथकी नायिका भए पनि सुन्दरताका कारण उनको चर्चा विश्वका धेरै देशमा हुने गरेको छ ।सन् १९८५ को जुन १९ मा मुम्बइमा जन्मेकी काजल खासगरी तेलेगु र तामिल फिल्महरुले सफलताको शिखरमा छन् । २००४ को क्यु हो गयाना&rsquo; नामक हिन्दी फिल्मबाट...
सुशान्त प्रकरणमा नयाँ खुलासा: पूर्व प्रेमिका अंकिताले भनिन्-'रियासँगको सम्बन्धका कारण तनावमा थिए सुशान्त,चाहन्थे ब्रेकअप'
एजेन्सी - सुशान्त सिंह प्रकरणमा नयाँ खुलासा भएको छ । रिया चक्रवर्तीको विषयमा यो खुलासा सुशान्तकी पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडेले गरेकी हुन् । बिहार पुलिसलाई सुशान्त सिंह राजपूतकी पूर्व प्रेमिका अंकिताले दिएको जानकारी अनुसार &lsquo;मणिकर्णिका&rsquo; को प्रोमोशनको क्रममा सुशान्त सिंहले उनलाई शुभकामना दिन मेसेज गरेका थिए । अंकिताले बिहार प्रहरीलाई दिएको...
‘केजीएफ २’ को पोस्टरमा सञ्जय दत्तको दमदार लूक
नयाँ दिल्ली &ndash; &lsquo;केजीएफ&rsquo; को अपार सफलतापछि फिल्मको दोस्रो च्याप्टर प्रतीक्षित बनेको छ । फिल्ममा अझ सञ्जय दत्त पनि हुने भएपछि फ्यानको पर्खाइ हुने नै भयो । फिल्ममा सञ्जय दत्त खलनायकको भूमिकामा देखिनेछन् । आज सञ्जयको जन्मदिनमा &lsquo;केजीएफ&rsquo; टिमले सञ्जयलाई प्रस्तुत गरिएको फिल्मको लूक सार्वजनिक गरेको छ । सञ्जयले ट्वीट गरेर आफ्नो...
"जब बोल्ड एण्ड सेक्सीको उपाधि पाए तब फिल्म छाडन वाध्य भए!"
काठमाडौं &ndash; &lsquo;याद पीया कि आने लगी&lsquo;&rsquo; फाल्गुणी पाठकको यो गीतमा मोडलिङ गरेपछि चर्चाको शिखरमा पुगिन् &ndash; रिया सेन। गीत रिलिजपछि उनको करिअरमा उपाधी थपियो बोल्ड एण्ड सेक्सी। एक अन्तरवार्ताका क्रममा उनले भनिन् &lsquo;यहि उपाधीले मलाई बलिउड फिल्म छाडन वाध्य बनायो।&rsquo; सन १९९८ मा उक्त गीतमा काम गर्दा उनी १६ वर्षकि...
सुशान्त आत्महत्या प्रकरण : धर्मा प्रोडक्सनका सिइओलाई प्रहरीले पठायो नोटिस,करन जोहरलाई पनि पत्र पठाइने
एजेन्सी - सुशान्त सिंह राजपूत आत्महत्या मामिलामा अब बलिउडका ठूला हस्तीलाई पनि बोलाइँदैछ । नयाँ नाम धर्मा प्रोडक्सनका सिइओ अपूर्व मेहताको हो जसलाई मुम्बई प्रहरीले २७ जुलाईमा सोधपुछका लागि उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ । यद्यपि, आइतबार महाराष्ट्रका गृहमन्त्री अनिल देशमुखले उनलाई करन जोहरको म्यानेजर बताएका छन् । अनिलले हालसम्म...
‘साइबर ट्रोलिङ’विरुद्ध सोनाक्षीको नयाँ अभियान
मुम्बई &ndash; बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले साइबर उत्पीडनविरुद्ध नयाँ अभियान शुरु गरेकी छिन् । उनले महाराष्ट प्रहरीको &lsquo;मिसन जोश&rsquo; सँग मिलेर फुलस्टपटुसाइबरबुलिङ अभियान थालेकी हुन् । &lsquo;साइबर उत्पीडनमाथि रोक अभियान &lsquo;मिशन जोश&rsquo; को पहल हो, म महानिरीक्षक प्रताप दिवाकरसँग मिलेर यसमा काम गर्नेछु,&rsquo; सोनाक्षीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी छिन् । यो अभियानले जागरुकता...
बलिउड अभिनेता अमिताभ र छोरा अभिषेकको कोरोना रिपोर्ट आयो
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चन र उनका छोरा अभिषेकले कोरोना भाइरसलाई जितेका छन् । १२ दिन अगाडि कोरोना पुष्टि भएका अमिताभ र उनको छोरा अभिषेकको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। भारतको मुम्बईको नानावती अस्पताल भर्ना भएका उनहरुको कोरोना पछिल्लो रिपोट नेगेटिभ आएको छ । तर अमिताभलाई भने अझै दुई पटक...
आलिया र ज्याकलिनको कंगनालाई यस्तो जवाफ
नायिका कंगना रनावतले नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधनपछि बलिउडकर्मीमाथि एकपछि अर्को आरोप लगाइरहेकी छिन् । उनले, नायिका आलिया भट्टको चर्को आलोचना पनि गरिरहेकी छिन् । हालै मात्र, एक टेलिभिजन अन्र्तवार्तामा आलियाले ज्याकलिन फर्नान्डेज र आलिया भट्टलाई विदेशी नागरिक भन्दै दर्शकहरुले उनीहरुलाई मन पराएका कारण आफूलाई दर्शकबाट कुनै आशा नभएको उल्लेख...
अभिनेत्री ऐश्वर्या अर्जुनमा पनि कोरोना पोजेटिभ
मुम्बई &ndash; दक्षिण भारतीय फिल्मकी अभिनेत्री ऐश्वर्या अर्जुनमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको जनाएकी छिन् । &lsquo;हालै मेरो कोरोना टेस्ट पोजेटिभ आएको छ, म घरमै क्वारेन्टिनमा छु, मेडिकल टिमले दिएको सबै सल्लाहको पालना गरिरहेकी छु,&rsquo; उनले भनिन् । उनले यदि कोही सम्पर्कमा आएको भए आफ्नो...
प्रभास र दीपिका एउटै फिल्ममा, दीपिकासहित दर्शक उत्साहित
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 19th July 2020
काठमाडौं &ndash; दक्षिण भारतीय फिल्मका सुपरस्टार प्रभास र बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले एउटै फिल्ममा काम गर्ने भएका छन् । यी दुईलाई एकसाथ दक्षिण भारतीय फिल्ममा देख्न पाइन भएको हो । फिल्मलाई नाग आश्विनले निर्देशन गर्नेछन् । दीपिकाले यो फिल्ममा काम गर्न पाउँदा आफू उत्साहित भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएकी छिन् । दक्षिण भारतीय...
कन्नड फिल्म स्टार ध्रुव सर्जा र उनकी पत्नीमा पनि कोरोना पुष्टि
काठमाडौं &ndash; कोरोनाको महामारी बढ्दै गइरहेको छ । भारतमा सेलिब्रेटीहरुमा कोरोना पोजेटिभ देखिएका खबरहरु आइरहेका छन् । बलिउड स्टार अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय र उनकी छोरी, अनुपम खेरको परिवारमा यसअघि कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । यसैबीच कन्नड फिल्म स्टार ध्रुव सर्जामा पनि कोरोना संक्रमण भएको छ । सर्जाले सामाजिक सञ्जालमार्फत...
जब अभिनेत्री राधिकाले सेफका साथ तस्वीर खिचेर सामाजिक संजालमा शेयर गरिन्...
मुम्बई &ndash; बलिउड अभिनेत्री राधिका आप्टे यतिबेला लण्डनमा छिन् । लण्डनमा भएका बेला उनले एक तस्वीरमा सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरेकी थिइन् । उक्त तस्वीरका कारण राधिकाले ट्रोलिङको सामना गर्नुपरेको छ । शेयर गरेको तस्वीरमा उनले मास्क लगाएकी थिइनन् । कोरोना महामारीका कारण यतिबेला धेरैजसो घरमै कैद छन् । भारतमा बलिउडकर्मी पनि घरबाट...
अमिताभ बच्चनको स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै फ्यानहरुले लगाए महामृत्युञ्जय यज्ञ
मुम्बई &ndash; बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनलाई कोरोना भाइरस देखिएपछि उनका फ्यानहरु चिन्तित बनेका छन् । अमिताभसँगै उनको परिवारका सदस्य अभिषेक, ऐश्वर्या र आराध्यामा पनि कोरोनाको संक्रमण भएको छ । फ्यानले बच्चन परिवारको स्वास्थ्यलाभको कामना गरिरहेका छन् । अमिताभको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै पूजापाठ पनि गरिएको छ । यसैबीच कलकत्तामा रहेका अमिताभका फ्यानले...
अभिनेत्री दिव्याको निधन, संसार छाड्नु पूर्व लेखिन् यस्तो मनछुने ‘स्टाटस’
काठमाडौं - बलिउड अभिनेत्री, मोडल तथा गायिका दिव्या चौकसेको आइतवार निधन भएको छ । विगत साढे एक वर्षदेखि क्यान्सरसँग जुधिरहेकी दिव्याको आईतवार निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् । दिव्याकी दिदी सौम्या अमिश वर्माले फेसबुक पोस्टमार्फत् यसबारे जानकारी दिएकी हुन् । यसअघि दिव्याले पनि १८ घण्टा अघि आफ्नो इन्स्टाग्राममा एउटा मेसेज...
एशियाकै ‘सेक्सी’ सेलेब्रेटी आलियाका हट तस्बिर
एजेन्सी - भारतीय नायिका आलिया भट्ट २०१९ मा एसियकाकै सेक्सी सेलेब्रेटीको सुचीमा अंग्रपक्तिमा देखिइन । योसँगै उनको निकै चर्चा चुलियो बुधबार लण्डनमा इस्टर्न आई म्यागाजिनले आयोजना गरेको सर्वेक्षणमा आलिया भट्ट &lsquo;सेक्सी&rsquo; महिला को अंग्रपक्तिमा देखिएकी हुन् । उक्त, म्यागजिनले भोटिङको आधारमा उत्कृष्ट छनौट गरेको थियो । उक्त सर्बेक्षणमा सबै भन्दा बढि...
अभिषेक बच्चनलाई पनि कोरोना पुष्टि
काठमाडौं &ndash; भारतीय चलचित्र अभिनेता अभिषेक बच्चनलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यसअघि शनिबार नै उनका पिता अमिताभ बच्चनलाई पनि संक्रमण पुष्टि भएर अस्पताल भर्ना भएका थिए । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमिताभ र अभिषेक दुबैमा संक्रमण पुष्टि भए पनि परिवारका अन्य सदस्यमा संक्रमण देखिएको छैन । अभिनेता अभिषेक बच्चनले सामाजिक सञ्जालमार्फत...
काठमाडौं &ndash; बलिउड अभिनेता अमिताभ बच्चनमा कोरोना भाइरस (कोभिड&ndash;१९) को संक्रमण भएको छ । अभिनेता बच्चनले आफूमा कोरोरा भाइरसको संक्रमण भएको सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिएका हुन् । उनले कोरोना परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको बताएका छन् । &lsquo;ममा कोेरोना पोजेटिभ देखिएको छ, हस्पिटलमा सिफ्ट भएको छु,&rsquo; अमिताभले ट्वीटर तथा फेसबूकमार्फत जनाएका छन् ।...
यी हुन् अंग प्रदशर्न गरेर चर्चामा आएका बलिउडका यी ५ अभिनेत्री
एजेन्सी - विश्वमै सफल मानिएको बलिउड उद्योगमा अभिनेता र अभिनेत्रीहरु पनि उत्तिकै प्रतिभाशाली छन् । भारतीय कलाकारहरु उत्कृष्ट अभिनय शैलीका कारण समय समयमा संसारभरीनै तारिफ बटुलिरहेका हुन्छन् । सुन्दरता र अभिनय क्षमताका कारण बलिउड अभिनेत्रीहरु सबैको नजरमा योग्य छन् तर बलिउडमा नै यस्ता केही अभिनेत्री छन् जो बोल्ड तस्बिर र भिडियोको...
घर अघिनै आएर एक समुहले सलमानको ढाडमा डण्डाले हिर्काएपछि...
काठमाडौं - विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै फिल्मी क्षेत्रमा पनि यसको असर देखिएको छ । सधै चर्चामा रहने बलिउड पनि कोरोनाको मारमा परेको छ । तर लकडाउनको समयमा पनि बलिउडमा भने पुरानो फोटो र प्रसँगले स्थान बनाएको छ । बलिउडक कलाकारका पुराना फोटो र किस्साले सामाजिक सञ्जालमा निकै स्थान पाएका छन् ।...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 07th July 2020
काठमाडौँ । नायक सुशान्त सिंह राजपुत अभिनित अन्तिम चलचित्र &lsquo;दिल बेचरा&rsquo;को ट्रेलर सोमबार सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक भएको एक दिन पनि नवित्दै यो ट्रेलरले युटुबमा नयाँ रेकर्ड राखेको छ । चलचित्रको ट्रेलरलाई ५० लाख लाइक मिलेको छ । यो कुनै पनि चलचित्रको ट्रेलरले पाएको सबैभन्दा बढी लाइक हो । यसअघि भारतीय...
केही वर्षअघि नायिका जिया खानको मृत्युपछि विवादमा घेरिएका सुरज पंचोली एकपटक पुनः विवादित बनेका छन् । सुशान्त र उनकी पूर्व म्यानेजर दिशा सालियानको आत्महत्यामा सुरजको नाम मुछिएको छ । भारतीय मिडियामा प्रकाशित विभिन्न खबरका अनुसार दिशा र सुरज सम्बन्धमा थिए । दिशा गर्भवतीसमेत भएकी थिइन् तर सुरज उनीसँग विवाह गर्न...
सुशान्तको ‘भिसेरा रिपोर्ट’ आयो, यसरी भएको थियो मृत्यु !
करिव १५ दिन अघि बलिउडका चर्चित अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको निधन भयो। उनले मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरको फेनमा पासो लगाएर आफ्नै ज्यान फाले । उनले घरमै पासो लगाएर आफ्नो ज्यान फालेपनि परिवारले भने मृत्यु रहस्यमय भन्दै अनुसन्धानको माग गरेको थिए । मुम्बई प्रहरीले घटना रहस्यमय भन्दै यस घटनालाई लिएर अझै पनि...
यसकारण ज्याकलिनले राता रात छाडिन् सलमानको फार्महाउस !
काठमाडौ&ndash; लकडाउनका कारण बलिउड अभिनेता सलमान खानको फार्महाउस फसेकी बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिसले हालै फार्महाउस छोडेकी छिन्। लामो समय देखिफार्महाउसमा बस्दै आएकी उनले फार्महाउस छाडेको भारतिय मिडियाले जनाएको छ । सलमान खानकी जजिकैकी मिल्ने साथि भएर संगै बसेकी अभिनेत्री ज्याकलिनले आफु फार्महाउस छाडेर जाने बारे सामाजिक संजालमा स्टाटस लेखेर फयानहरुलाई जानकारी...
अजयको ‘मैदान’ १३ अगस्तमा रिलिज हुने
मुम्बई &ndash; अजय देवगन स्टारर स्पोर्टस् ड्रामा &lsquo;मैदान&rsquo; १३ अगस्तमा रिलिज हुने भएको छ । अजयले ट्वीट गर्दै फिल्म हलमा सन् २०२१ को अगस्तमा रिलिज हुने जानकारी दिए । यो फिल्म फुटबलको कथामा आधारित छ । अजयले फिल्ममा कोच सैयद अब्दुल रहिमको भूमिका निभाएका छन् । सैयदलाई भारतमा भारतीय फुटबलका संस्थापक...
काठमाडौं &ndash; चर्चित भारतीय कोरियोग्राफर सरोज खानको निधन भएको छ। हृदयघात भएपछि गत महिना मुम्बईको गुरू नानक अस्पताल भर्ना गरिएकी उनको बिहिबार राति मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । ७२ बर्षिया खानलाई जुन १७ मा सास फेर्न समस्या भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। सरोजका पतिसँगै दुई छोरी र एक छोरा...
सुशांत सिंह राजपूतको आत्महत्या पछि बलिउडमा भतीजावाद सम्बन्धी बहस तीव्र भएको छ। सुशांतको परिवारले नेपोमिटर अनुप्रयोग पनि घोषणा गरेका छन जसको सहयोगमा यो थाहा पाउन सकिन्छ कि फिल्ममा कती नपुंसकवाद छ। यद्यपि पछिल्ला केही वर्षहरूमा उद्योगमा नेपोटिज्म र नेपोटिज्मका सवालहरू सुर्खाहरूमा थिए तर यो संस्कृति दशकौंदेखि बलिउडमा छ। अक्षय कुमारले मिड...
सुशान्त आत्महत्या प्रकरण : मुम्बई प्रहरीले पठायो ट्वीटरलाई पत्र
मुम्बई &ndash; बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको आत्महत्याबारे थप अनुसन्धान गर्न मुम्बई प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरलाई एक पत्र पठाएको छ । प्रहरीले सुशान्तको ६ महिनाको ट्वीटर रेडर्क मागेको छ । सुशान्तको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको देखिएको छ । प्रहरीले आत्महत्याको कारण पत्ता लगाउने कोशिश गरेको जनाइएको छ । प्रहरीले परिवारका सदस्य,...
जब करिनालाई आफन्तले सैफ अलि खानसँगविवाह नगर भने
एजेन्सी- बलिउडकी सफल अभिनेत्री मध्ये एक करिना कपूर र अभिनेता सैफ अली खान चर्चित र उत्कृष्ट जोडी मानिन्छन् । सैफ र करिनाको लव स्टोरी कुनै कथाभन्दा कम छैन । यो उदाहरणीय जोडीका लागि पनि सुरुवाती दिन चुनौतीपूर्ण रहे । प्रेममा रहेका दुबैलाई विवाह गरी सम्बन्ध अघि बढाउन निकै चुनौतीको सामना गर्नु...
निराश अनुहारमा सेतो कपडामा नै भेटिइन्, सुशान्तकी प्रेमिका रिहा
सुशान्त सिंह राजपुतको निधन पछि एकाएक चर्चामा आएको नाम हो रिहा चक्रावती । उनी एक वर्षदेखि सुशान्तसँग प्रेममा रहेको कुरा भारतीय मिडियाहरुले बताउँदै आएका छन् । सुशान्त र रिहा इटाली भ्रमणमा निस्किएपछि उनीहरुको प्रेम सम्बन्धको चर्चा चलेको थियो । अहिले सुशान्तको निधन पछि उनी फेरि चर्चामा आएकी छिन् । सुशान्तसँग लामो समयसम्म...
पूर्व म्यानेजर दिशा र सुशान्तको आत्महत्या बिच भेटियो गहिरो सम्बन्ध !
मुम्बइ&ndash; बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्याको बिषयले निकै चर्चा पायो । अनुसन्धानका क्रममा पुलिसले उनको घरमा काम गर्ने कामदारहरुको पनि बयान लिएको छ । पुलिसलाई दिएको बयानमा उनको घरका स्टाफले सुशान्तले आत्महत्या गर्नुभन्दा तीन दिन अघि नै आफूहरुको सबै पारिश्रमिक दिएको बताएका छन् । रिपोर्टका अनुसार केहि समयदेखि बिभिन्न फिल्मबाट...
सुशान्तका पिताले भने- 'हामीले धेरै पूजाआजा गरेपछि सुशान्त जन्मिएको थियो,ऊ विशेष आत्मा थियो'
मुम्बई &ndash; बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतले आत्महत्या गरेपछि बलिउडकर्मीले दुःख व्यक्त गरेका छन् । केही महिनादेखि डिप्रेसनमा रहेका सुशान्तको आत्महत्याले बलिउडमा &lsquo;नेपोटिज्म&rsquo; माथि बहस शुरु भएको छ । &lsquo;एमएस धोनी&rsquo; र &lsquo;छिछोरे&rsquo; जस्ता फिल्ममा दमदार अभिनय गरेका सुशान्त सिंहले ३४ वर्षको उमेरमा आत्महत्या गरेका थिए । उनको फिल्म &lsquo;दिल बेचारा&rsquo;...
करोडौँ फ्यानहरुलाई स्तब्ध बनाउँदै अभिनेत्री सोनाक्षीले लिइन् यस्तो गम्भीर फैसला
काठमाडौं&ndash; आफ्ना करोडौँ फ्यानहरुलाई स्तब्ध बनाउँदै बलिउड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हाले एक गम्भीर फैसला लिएकी छिन् । उनले हालै कसैले नसोचेको एक निर्णय लिइन् । वास्तवमा अभिनेत्री सिन्हा ट्रोलिङ र आलोचकहरुद्वारा निकै संकटमा थिइन्, जसकारण उनले ट्विटरबाट विदा लिइन् । शनिबार, उनले यो कुरा इन्स्टाग्राममा घोषणा गरिन् । अमेरिकी अभिनेत्री र हास्य...
जब रजनी कान्तको घरमा बम राखेको फोन आयो
एजेन्सी -बिहीबार दक्षिण भारतीय फिल्मका सुपरस्टार रजनी कान्तको घरमा बम राखिएको घटनाले निकै चर्चा पायो । एक अपरिचित नम्बरबाट आएको कलले सुपरस्टार रजनी कान्तको घरको बगैचामा बम भएको जानकारी दिएको थियो । खासमा बिहीबार बिहान चेन्नई पुलिसलाई एक अपरिचित ब्यक्तिले फोन गरी रजनी कान्तको पोएस गार्डनको घरमा बम भएको बताएका थिए...
‘दबंग गर्ल’ सोनाक्षी सिन्हाको १५ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल तस्बिरमा
एजेन्सी - फ़िल्म दबंगबाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी चर्चित सुन्दर नायिका हुन् सोनाक्षी सिन्हा । बलिउडमा बिभिन्न कारणले चर्चामा आउने सिन्नाले केही फिल्ममा सफल अभिनय गरेकी छन् ।&nbsp;उनि अभिनेता शत्रुधन सिन्हाकी छोरी हुन् । दबंगमा सलमान खानसँगग अभिनय गरेपछाडि उनलाई दबंग गल भनेर पनि चिनिने गरिन्छ । बत्तिस वर्ष पुगेकी सिन्हा...
अनमोल केसीसँग स्क्रिन शेयर गर्दै अभिनयमा डेब्यु गरेकी अदिती बुढाथोकीको पहिलो चलचित्र &lsquo;कृ&rsquo;हो । उक्त चलचित्रबाट नेपाली सिनेमा जगतमा निकै चर्चा चुलियो । पछिल्लो समयमा पनि बलिउडमा संघर्ष गरिरहेकि छिन् । यसैक्रममा उनको चर्चा भारतीय मिडियामा समेत हुन थालेका छन् । केहि पहिला &lsquo;एबिपी न्युज&rsquo; नामक...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 14th June 2020
बलीउड कलाकार शुशान्त सिंह राजपुतले आत्महत्या गरेका छन् । भारतिय मिडियामा प्रकाशित खबरअनुसार ३४ बर्षिय उनले मुम्बइको बान्द्रास्थित आफ्नै निवासमा आत्महत्या गरेका हुन् ।राजपूतले आफ्नै घरमा फाँसी लगाएर ज्यान दिएका हुन् । उनको कोठाको ढोका तोडेर हेर्दा उनि झुन्डिएको अवस्थामा रहेको बताइएको छ । भारतिय प्रहरीका अनुसार उनि...
फरिना काडरको बिकिनी शटहरू जसले इन्टरनेटलाई हल्लायो!
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 19th March 2020
अभिनेत्री फर्राह कादर, बिकिनीमा उनको सेक्सी र बोल्ड फोटोशूट्सका साथ सोशल मीडियामा तातो पार्दै आई उनका लोकप्रिय फोटोहरू। पछि, Farrah Kader अन्तिम पटक थ्रिलर फिल्म "भूत कहानी" मा देखा पर्&zwj;यो। एक महान व्यक्तित्वले पाएको आशीर्वाद, फराह पक्कै जान्दछ कसरी हेडलाइटहरू खिच्ने। उनी आफ्नो जंगली पक्ष देखाउन कहिल्यै पछि हटिनन् र...